Thu, Jul 2, 2020 at 9:06pm
बेलायतमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट दुई दर्जन नेपालीको मृत्यु भएको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। बेलायतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने धेरै पूर्व गोर्खा सैनिक छन्। दूतावासको सूचीमा भएका दुई दर्जनमध्ये आधाभन्दा धेरै भूतपूर्व गोर्खा नै छन्। मृतकमध्ये दुई जना महिला छन् भने अरू सबै पुरुष। मृत्यु हुने महिलामा एक ३२ वर्षीया र अर्की ३९ वर्षीया छन्। गोर्खा वेल्फेयर ट्रस्टले पनि शनिबारसम्म १८ जना पूर्व..
अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायक कम्पनीद्वारा ३३ उडान, घर फर्किए साढे ४ हजार विदेशी
शनिबार, बैशाख १३, २०७७ साल
काठमाडाैं, १३ वैशाख। देशभर लकडाउन गरिएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानसमेत प्रतिबन्ध गरिएको अवस्थामा मुलुकको १ मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिकजसो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन् । विश्वलाई सम्पर्क सञ्जालका रूपमा जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लकडाउनको अवधिमा ३३ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । १० चैतदेखि १२ वैशाखसम्म विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले ३३ अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको प्राधिकरणका..
अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५० हजार नाघ्यो
जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार शुक्रबार साँझसम्ममा अमेरिकामा कोभिड–१९ का कारण ५० हजार ३१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमित संख्या ८ लाख ७० हजार ४ सय ६८ पुगेको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै न्युयोर्कमा १६ हजार ३ सय ८८ जनाको मृत्यु भएको छ। कोभिड–१९ बाट विश्वमै अति प्रभावित अमेरिकामा हालसम्म ८० हजार ९ सय ३७ जना निको भइसकेका छन्। जनवरी २१ मा पहिलो संक्रमित..
साउदी अरेबियामा रहेका श्रमिकलाई सम्पर्कमा रहन राजदूतावासकाे आग्रह
शुक्रबार, बैशाख १२, २०७७ साल
काठमाडौं,१२ वैशाख। साउदी अरेबियामा रहेका नेपाली श्रमिकलाई खानबस्न कुनै समस्या परेमा आफ्नो विवरण दूतावासमा टिपाउन रिहादस्थित नेपाली राजदूतावासले आग्रह गरेको छ । नेपाली दूतावासले सबै नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो यथार्थ समस्या दूतावासमा जानकारी गराउन आग्रह पनि गरेको हो । श्रमिकले भने त्यहाँको नेपाली दूतावासको फोन रिसिभ नभएको भन्दै गुनासो गदै आएका छन् । विगत चार वर्षदेखि साउदीमा कार्यरत पर्वतको बाच्छा स्थायी घर बताउने विमल..
ट्रम्पले गरे अमेरिकामा ग्रिनकार्ड रोक्ने निर्णय लागु
बिहिवार, बैशाख ११, २०७७ साल
काठमाडौं, ११ वैशाख । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन रोक्ने उद्देश्यले अमेरिका प्रवेशमा ६० दिनसम्म प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यससँगै अमेरिकामा स्थायी बसोबासको नयाँ अनुमति (ग्रिनकार्ड) दिने काम र विदेशीलाई अमेरिका प्रवेश बन्द भएको छ । ट्रम्पले गत मंगलबार नै यदि आवश्यक परेमा यस्तो प्रतिबन्ध थप ३० दिनका लागि या त्योभन्दा पनि लामो समयसम्मका..
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको पनि काेराेना परीक्षण हुने
बुधबार, बैशाख १०, २०७७ साल
इस्लामाबाद, १० वैशाख । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको पनि काेराेना 'कोभिड-१९' परीक्षण हुने भएको छ। उनले कोरोनाभाइरस पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिसँग भेटवार्ता गरेपछि उनको परीक्षण गर्न लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । उनका सल्लाहकार डा. फैजल सुल्तानलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री खानको कोरोना परीक्षण गरिने जनाइएको छ । हालसम्म पाकिस्तानमा हालसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट २०१ पुगेको छ भने ९ हजार ५ सय बढी संक्रमित छन्..
आप्रवासी श्रमिकलाई नियन्त्रणमा लिइ निष्कासन गर्दै कतार
शुक्रबार, बैशाख ५, २०७७ साल
दाेहा, ५ वैशाख । कोभिड–१९ परीक्षण गर्न लागिएको भन्दै कतारी अधिकारीले सयौं आप्रवासी श्रमिकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र त्यसपश्चात कैयौंलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट निष्कासन गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ। गत फागुन २९ र ३० मा कतार प्रहरीले गिरफ्तार गरेको २० नेपाली श्रमिकसँग एम्नेस्टीले गरेको अन्तर्वार्तामा उनीहरुले कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने भनेर हिरासतमा लगिएको र त्यहाँ धेरै दिनसम्म राखेर पछि नेपाल फर्काएको बताएका छन्। नेपाली..
जापान सरकारले गर्‍याे देशव्यापी आपतकालको घोषणा
जापान, ५ वैशाख । कोरोना भाइरसको संक्रमण लगातार बढ्ने क्रम जारी रहेपछि जापानमा देशव्यापी आपतकालीन अवस्था लागु भएको छ । योसँगै अब गभर्नरहरुले नागरिकलाई घरमै बस्ने आदेश दिन पाउने भएका छन् । घर भित्रै बस्नका लागि लागि बाध्यकारी कानून लागु गर्ने वा सजायको पनि व्यवस्था भने हुने छैन । देशव्यापी आपतकालीन अवस्था आउँदो मे ६ सम्म जारी रहने जापान सरकारले उल्लेख..
अझै एक साता थपियाे बेलायतमा लकडाउन
लण्डन, ५ वैशाख । बेलायतमा लकडाउन कम्तिमा तीन हप्ताका लागि लम्बिने भएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा लिने प्रयास स्वरुप लागु भएको लकडाउन कम्तिमा थप तीन हप्ता बढाउने निर्णय भएको बेलायती विदेश मन्त्री डोमिनिक राबले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अहिले नै लकडाउन खुकुलो बनाउनु जोखिमपूर्ण हुने निर्णयमा पुगेको बताएका हुन् । अहिले नै लकडाउन खोल्दा..
कोरोना संक्रमणको ‘रेड जोन’मा भारतका प्रमुख ६ शहर
बिहिवार, बैशाख ४, २०७७ साल
नयाँ दिल्ली, ४ वैशाख । भारतको राजधानी दिल्ली र आर्थिक राजधानी मुम्बईसहित भारतको प्रमुख ६ शहर कोरोना भाइरस संक्रमणको ‘रेड जोन’मा परेको छ । भारत सरकारले मंगलबार जारी गरेको निर्देशिकामा संक्रमणको तहको आधारमा ६ वटै शहरलाई ‘रेड जोन’मा राखिएको हो । ‘रेड जोन’ले संक्रमणको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको क्षेत्र देखाउँछ । केही मात्रै संक्रमित रहेको क्षेत्रलाई ‘ओरेन्ज जोन’ र संक्रमण नदेखिएको..
अष्ट्रेलियाको सरकारले नेपालको भिसालाई थप ६ महिना मान्यता
काठमाडौं, ४ बैसाख । अष्ट्रेलियाको सरकारले नेपालको भिसालाई थप ६ महिना मान्यता दिने भएको छ । अष्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावासले बिहीबार एक वक्तव्य जारी गर्दै १ जनवरी, २०२० देखि १ मार्च २०२० सम्म जारी गरिएको भिसालाई थप ६ महिना मान्यता दिने जानकारी गराइएको छ । ..
डोनाल्ड ट्रम्प भन्छन, अब अमेरिका छिटै खुल्नेछ
काठमाडौं, ४ वैशाख । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीको उत्कर्ष पार गरिसकेको बताएका छन् । उनले अब केही राज्यहरु यही महिनादेखि पुन खुलाउन थाल्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसबाट दैनिक ब्रिफिङका क्रममा उनले राज्यहरु फेरि खुला गर्ने विषयमा राज्यका गभर्नरहरुसँग कुरा गरेपछि बिहीबार घोषणा गर्ने बताएका छन् । ‘हामी फेरि फर्किन चाहन्छौं, उनले भनेका छन् ‘हामी चाहन्छौं कि..
जातीय हिंसामा उत्तरपूर्वी नाइजेरियामा २५ जनाको मृत्यु
बुधबार, बैशाख ३, २०७७ साल
अबुजा, ३ वैशाख । अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाको उत्तरपूर्वी प्रान्त ताराबामा भड्किएको जातीय हिंसामा परेर कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु हुनुका साथै अरु धेरै जना घाइते भएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार गत सोमबार स्थानीय शोमो र जोली जातीय समूहका व्यक्तिहरुबीच भएको भिडन्तमा झण्डै १०० वटा घरमा क्षति पुगेको छ । ताराबाको लाउ नाम गरेको गाउँमा यी दुई प्रमुख जातिको बसोबास रहेको..
कोरिया निर्वाचन: काेराेना सङ्क्रमितले पनि मतदान गर्न पाउने
एजेन्सी । कोरोना सङ्क्रमण माहामारीकै बीच राष्ट्रियसभाका ३०० सदस्यका लागि दक्षिण कोरियामा आज आम निर्वाचन हुँदैछ । चारवर्षे कार्यकालका लागि चुनिने उम्मेदवारलाई चार करोड ४० लाख मतदाताले मतदान गर्नेछन् । वर्तमान राष्ट्रपति मुन जे इनको पार्टी डोमोक्रेटिक बहुमत ल्याउने योजनासहित मैदानमा छ । हाल सदनमा यो दलको १२० सिट छ । बलियो प्रतिद्वन्द्वी मानिने युनाइटेड फ्युचर पार्टी पनि आफ्नो बहुमत आउनेमा..
ट्रम्पले दिए डब्लुएचओलाई दिँदै आएको रकम रोक्न निर्देशन
काठमाडाैं, ३ वैशाख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) लाई दिँदै आएको रकम बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी रोक्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्न डब्लुएचओ असफल भएको भन्दै ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनलाई रकम बन्द गर्न निर्देशन दिएको जनाएका हुन्। चीनबाट कोरोना भाइरस सुरु भएपछि डब्लुएचओ यसलाई सम्हाल्न असफल भएको र सही परिस्थितिलाई लुकाएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। यसअघि..
युद्धग्रस्त यमनमा भटियाे कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण
काठमाडाैं, २९ चैत। यमनमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमण नपुगेका केही देशहरुमध्ये यमन पनि एक थियो । युद्धग्रस्त यमनमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएसँगै सहायता एजेन्सीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वर्षौको युद्धका कारण यमनको स्वास्थ्य प्रणाली अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छ । गैर सरकारी संस्था अक्सफामले यो दुःखद झट्का भएको बताएको छ भने इन्टरनेशनल..
शुक्रबार, चैत्र २८, २०७६ साल
काठमाडाैं, २८ चैत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसको उपचारमा प्रभावकारी हुने औषधि पत्ता लागेको बताएका छन् । ह्वाइट हाउसले बनाएको कोरोना टास्क फोर्सको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले औषधि उत्पादक कम्पनी फाइजरले कोरोना भाइरसको उपचारका लागि प्रभावकारी औषधि उत्पादन गरेको बताए । उनले सो औषधिको मानवीय परीक्षण चाँडै सुरु हुने पनि बताए । ट्रम्पले ब्रिफिङका क्रममा औषधि उत्पादक सो औषधि..
कोरोनाको उद्गमस्थल वुहान सहरमा हटाइयो लकडाउन
बुधबार, चैत्र २६, २०७६ साल
वुहान, २६ चैत । काेराेना भाइरसकाे उद्गमस्थल वुहान सहरकाे लकडाउन हटाइएकाे छ। कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको चीनको हुबे प्रान्तस्थित वुहान सहरमा लगाइएको लकडाउन झण्डै तीन महिनापछि हटाइएको हाे। साेमबार चीनमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या शून्यमा झरेकाे देखिएपछि मंगलबार प्रकोप सुरु भएको वुहान सहरमा लकडाउन हटाइएको बिबिसीले जनाएको छ । तर मंगलबार फेरि २ जनाकाे काेराेना कारण ज्यान गएकाे वर्ल्डाेमिटर्सकाे तथ्यांकले..
लण्डन, २५ चैत । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण विगत १० दिनदेखि आफ्नै घरमा सेल्फ आइसोलेसनमा बसिरहेका बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन आइतबार स्वास्थ परीक्षणका लागि अस्पताल पुगेका थिए । स्वास्थ्यस्थिति कमजोर हुँदै गएपछि सोमबार नै उनलाई लण्डनको सेन्ट थोमस अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । नियमित जाँचका क्रममा स्वास्थस्थिति थप गम्भीर भएपछि उनलाई सोही अस्पतालको सघन उपचारकक्षमा सारिएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय टेन डाउनिङका..
कोरोनाका कारण लिवियाका पूर्वप्रधानमन्त्रीको मृत्यु
ट्रिपोली, २४ चैत। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लिवियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महमूद जिब्रीलको मृत्यु भएको छ । जिब्रिलको इजिप्टको एक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । स्थानीय मिडियाहरुले लिब्रिलको राजनीतिक दल नेशनल फोर्सेज अलायन्सलाई उदृत गर्दै मार्च २६ मा उनमा कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएको जनाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री जिब्रिलको फेसबुक पेजमा पनि धार्मिक सन्देश अपडेट गरिएको छ, जुन त्यहाँको परम्पराअनुसार सामन्यतया कसैको..
न्युयाेर्क, २३ चैत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफूले भारत सरकारसँग मलेरिया प्रतिरोधी औषधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अमेरिका पठाइदिन आग्रह गरेको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले यो औषधी कोरोनाभाइरस बिरामीको उपचारमा निकै प्रभावकारी हुनसक्ने दाबी सुझाव दिएका छन् । यद्यपि, स्वास्थ्य विशेषज्ञले कोरोना संक्रमणको उपचारमा यो औषधी प्रभावकारी हुन्छ भनेर दाबी गर्न कुनै आधिकारिक रिपोर्ट नभएको बताउने गरेका छन् । भारतले संसारभरी यो औषधी निर्यात..
सारोन मोलेम । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभरि फैलिएको छ। यो महामारीसँगै एउटा चाखलाग्दो तथ्य लुकेको छ। त्यो हो– संक्रमणबाट मृत्यु हुनेमा हरेक देशमा महिलाभन्दा पुरुष बढी छन्। यस्तो किन? आनीबानीका आधारमा यस्तो भएको विश्लेषण गरिएको छ। यो विश्लेषण केही हदसम्म तर्कसंगत पनि छ। चुरोट बढी तान्ने, समयमै स्वास्थ सेवा लिन अनिच्छुक र तुलनात्मक रुपमा हात कम धुनेमा महिलाभन्दा पुरुष बढी..
काठमाडौं, २३ चैत । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस)का कारण अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या ८ हजार नाघेकाे छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८ हजार ४५२ पुगेको छ । चीनबाट सुरु भएको कोरोना महामारी पछिल्लो समय यूरोप हुँदै अमेरिकामा तीव्र रुपले फैलिरहेको छ । विभिन्न तथ्यांक निकाल्ने संस्था वल्र्डोमिटर्सका अनुसार अहिलेसम्म अमेरिकामा ३ लाख..
अस्ट्रेलिया, २१ चैत । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले त्यहाँ रहेका पर्यटक र विद्यार्थीलाई अप्ठेरो अवस्था आइपरेको भए आफ्नै देश फर्किन सल्लाह दिएका छन् । उनले भने, ‘तपाईंहरु अहिलेको परिस्थितिमा समस्यामा छु जस्तो लागेको छ भने आफ्नो देश फर्किन सक्नुहुन्छ ।’ उनले विद्यार्थी भिसाका साथै अन्य विभिन्न भिसामा अस्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेकाहरुले आफ्नो देश फर्किएमा आफूले चाहेको सहयोग पाउनसक्ने समेत बताए । प्रधानमन्त्री मोरिसनले..
सोमालिया, २१ चैत । सोमालियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नुर हसन हुसेनको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण निधन भएको छ । उनको उपचारका क्रममा लण्डनमा ८३ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि उनी दुई सातादेखि किंग्स कलेज अस्पतालमा उपचाररत रहेका थिए । उनी सन् २००७ देखि २००९ सम्म सोमालियाको प्रधानमन्त्री बनेका उनी नुर एड्डेका नामले चर्चित थिए । इटलीका लागि पूर्व राजदूत..
फिलिपिन्स, २० चैत । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकर तथा रोकथामका लागि लागू गरिएको लडकाडउन उल्लंघन भए फिलिपिन्समा गोली हान्ने आदेश दिइएको छ । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टेले लकडाउनको उल्लंघन गर्नेलाई गोली हान्न आदेश दिएका हुन् । बुधबार राति देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई गोली हान्न सेना र प्रहरीले आदेश दिएका हुन् । 'प्रहरी र सेनालाई..
लिस्बन, १९ चैत। पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा बस्दै आएका आठ नेपालीमा कोरोनाको सङ्क्रमण भएको छ । उनीहरु सबै मार्कस्पोम्बलस्थित एउटै फ्ल्याटमा ‘रुम सेयरिङ’ गरी बस्दै आएका थिए । उनीहरुमध्ये एक जनालाई विगत २ सातादेखि निरन्तर ज्वरो आएको थियो । उनले स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा औषधि सेवन गर्दा समेत ज्वरो कम नभएपछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ । उनमा सङ्क्रमण पुष्टि भएलगत्तै..
काठमाडाैं, १९ चैत। फ्रान्समा कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट एकैदिन ४ सय ९९ को मृत्यु भएको छ । फ्रान्सका स्वास्थ्य सेवा निर्देशक जेरोमी सोलोमनले पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनका कारण ४ सय ९९ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिए । यससँगै यहाँ मृतकको संख्या ३ हजार ५ सय २३ पुगेको छ । उनीहरु सबैको मृत्यु अस्पतालमा भएको हो । फ्रान्समा महामारी सुरु भएपछि पहिलो पटक एकैदिन..
वुहान, १९ चैत । चीनमा कोरोना भाइरसबाट सर्वाधिक असर पारेको उहान शहरमा सोमबारदेखि मानिसको निर्वाध आवागमन शुरु भएको छ । कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल मानिएको चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण कम भएसँगै उहानमा आवागमन शुरु भएको हो । भाइरस संक्रमण तिब्र रुपमा फैलिएसँगै उहानमा झण्डै दुई महिनासम्म दशौं लाख मानिस घरभित्रै बस्न बाध्य भएका थिए । स्थानीय सरकारले हुबे प्रान्तको राजधानी उहान सहित प्रान्तका..
सोमबार, चैत्र १७, २०७६ साल
काठमाडौं, १७ चैत । जर्मनीको हेस्का राज्यका अर्थमन्त्री थोमक स्किफर मृत अवस्थामा भेटिएका छन् । फ्रान्कफर्ट र मेन्जको बीचमा रहेको होचिम शहरको एक रेल लाइनमा उनको शव भेटिएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएको शव पहिचानमा प्रहरीलाई कठिनाई उत्पन्न भए पनि उक्त शव अर्थमन्त्री थोमक स्किफरको नै रहेको त्यहाँको प्रहरीले पुष्टि गरेको हो। थोमकले आत्महत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीले उल्लेख..
Results 1601: You are at page4of 54